အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ကျော် ထောက်ပံ့ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ကျော် ထောက်ပံ့
HOLD FOR PAKISTAN AFGHAN REFUGEES BY KATHY GANNON.. In this picture taken on Wednesday, Feb. 8, 2017, Afghan refugee families wait for their turn to be registered, outside the government registration office in Peshawar, Pakistan. Rights group says Pakistan is forcing refugees home to uncertain future and war, while the UN refugee agency is complicit giving them money to return thus adding to the pressure to leave the relative safety of Pakistan. (AP Photo/Mohammad Sajjad)
အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ကျော် ထောက်ပံ့
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ထပ်မံတိုးချဲ့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်ဖို့ ကမ္ဘာ့ ဘဏ်ကနေ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ကျော်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့က အတည်ပြု ပြောကြားလိုက် ပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင်းက အဓိက မြို့ကြီး ၅ မြို့မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပြုလုပ်သွားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတွင်း စီးပွား ရေးလုပ်ငန်း တွေတိုးမြှင့်လာစေဖို့ အာဖဂန် အစိုးရကို ထောက်ပံ့ ပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ် တာဝန် ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီထောက်ပံငွေတွေထဲက မှ ၁၀၀ မီလီယံဟာ ဆင်းရဲ ဒုက္ခဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တိုးတက်လာအောင် ထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့ ၊ ၂၀ မီလီယံကတော့ အဓိက မြို့ကြီး ၅ မြို့ဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု အပိုင်းမှာ အသုံးပြုဖို့နဲ့၊ ၂၉.၄ မီလီယံကတော့ စိုက်ပျိုးရေးပိုင်းကဏ္ဍတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ နဲ့ အာဖဂန်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ဟာ့ရတ် ပြည်နယ် လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအပိုင်းမှာ ၆၀ မီလီယံအသုံးပြုသွားဖို့ အစိုးရနဲ့ ညှိနှိုင်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် ၀မ်းစာရှာဖွေဖို့ ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ အာဖဂန် ကျေးလက်နေ ပြည်သူ ၈ သိန်းကျော် ကိုလည်း ပါကစ္စတန် ၊အီရန် နိုင်ငံတွေက နေရပ်ကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ၀င်ငွေရရှိအောင် ကျေးလက်ဒေသ စီးပွားရေးနဲ့ ဖွံဖြိုးရေး အပိုင်းတွေမှာ မီလီယံ ၂၀၀ ကျော် အသုံးပြုသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အာဖဂန်အစိုးရ က ပြောပါတယ်။
Previous articleကိုလံဘီယာ FARC သူပုန်အဖွဲ့ လက်နက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံ လွှဲအပ်
Next articleစင်ကာပူနိုင်ငံက မြန်မာအိမ်အကူလုပ်သားတွေဟာ တရားဝင် စေလွှတ်ထားတာ မဟုတ်လို့ ကာကွယ်ပေးဖို့ ခက်ခဲနေ (ရုပ်/သံ)